Aadaafi Aartii – Ethipian Press Agency
“Ayyaanni Cuuphaa baranaa kan araaraati jennee yoo fudhanne waan gaarii irraa arganna” -Luba Balaay Makonnin
Gaazexaan Bariisaa ayyaana Cuuphaa Roobii dhufu kabajamu sababeeffachuun hariiroo ayyaanichi duudhaalee aadaa wajjin qaburratti Hogganaa Ittaanaa Mana Lubummaa Ortodoksii Itoophiyaa Luba Balaay Makonnin dubbiseera. Yaadnisaaniis kunooti. Cuuphaa Akka qajeelfama amantii Ortodoksiitti namni...	Read more »
Mana kitaabaa ammayyaa ‘Abrihoot’: Afrkaa bahaatti isa guddicha
Manni kitaabaa ammayyaa’aan ‘Abrihoot’ sadarkaa biyyoolessaa eegee Finfinnee, Mana Marii Bakka Bu’oota Ummataa fuulduratti qarshii biiliyoona 1.15 oliin ijaarame torban har’aa Ministira Muummee Doktar Abiyyi Ahmadiin kan eebbifame yoo ta’u, Kantiibaa Magaalaa...	Read more »
Jaarsummaasirna araaraafi haqaa
Jaarsummaan aadaa Oromoos ta’e Sirna gadaa keessatti kabajaa guddaa qaba. Jaarsummaan kafaltii waan hingaafanneef kan harkan qalladhe jedhee irraa baqatu hinjiru. Jaarsummaan walqixummaa, dhuugaafi haqaan saba tajaajila. Jaarsummaa keessatti kaadhimamuun akka ulfina...	Read more »
Caambaatee: Icciitii olaanaa Abbootiin Gadaa aangoo dabarsaniifi fudhatan walitti himan
Obbo Leeniin Quutoo Hamaadoo Yunivarsiitii Naannoo Oromiyaatti Daarikteera Inistiitiyuutii Qorannoo Afaan, Aadaafi Artii Oromooti. Hayyuun kun gaafdeebii dhiyeenya kana Gaazexaa Bariisaa waliin taasisaniin akka jedhanitti, Abbaansaanii jaarsa kabajamaa (waata biyyaati). Waata jechuun...	Read more »
Duudhaalee Sirna Gadaa Oromoon saboota biroo waliin nagaan akka jiraatu taasisan
Oromoon waldanda’ee waliin jiraachuuf ykn nagaafi tasgabbii keessoosaa eeggachuuf dhaabbilee adda addaa Sirna Gadaatiin tolfaman akkuma qabu, waliin jireenya saboota ollaasaa waarsuufis (ittifufsiisuuf) dhaabbilee aadaa Sirna Gadaatiin tolfaman hedduu qaba. Dhaabbilee kanneen...	Read more »
Oromoon ofii ulfina argachuuf dursee warra kaaniif ulfina kenna
Guyyaan Waldanda’uu Idil Addunyaa barana akka addunyaatti yeroo 24faf akka Itoophiyaafi Oromiyaatti ammoo yeroo 12faf kabajame ilaalchisuun Mariin Balal marsaa 16fa dhiyeenya kana mataduree ‘Duudhaalee Waldanda’uu: Gahee Tokkummaa Cimsuurratti Qabu’ jedhuun Finfinnee,...	Read more »
Seenaa Itoophiyaa keessatti yeroo baay’ee geggeessitoota waraanaa kan turan Oromoota. Yeroo baay’ee mootonni biyyattii ‘Nigusa Nagisti’ jedhaman teessoosaaniirra taa’u. Yeroo baay’ee kan biyyattii geggeessaa turan jeneraalota ykn abbaa duulaa (Raasota). Fakkeenyaaf kanneen...	Read more »
Saboota yeroo dheeraadhaa kaasanii seera ofii tumatanii itiin bulaa turan keessa tokko saba Oromooti. Heerriifi seerri isaa jireenya ummataa karaa hundaan kan ilaaluu yoo ta’u, sabni bilisummaa, nagaafi tokkummaadhaan misoomee wajjin akka...	Read more »
Torbii: Faaya aadaa mallattoo dubrummaa
Aadaa uffannaa dubartoota Oromoo Walloo keessatti faaya aadaatiin miidhaguun waanuma baramaadha. Faayaawwan aadaa dubartoonni Oromoo Walloo uffatan miidhaginasaanii ibsuun ala hiika dabalataa hedduu qaba. Faayi aadaa Wallootti durbi durba qarree ta’uu ishee...	Read more »
Maanguddoo Tuujii Urgeessaa: Ogeessa fayyaa mala aadaatiin ummata tajaajilaa turan
Bara barumsiifi qaroominni babal’atee hinjirretti maanguddoota Oromoo ogummaa fayyaa uumamaan argataniin ummata tajaajilaa turan hedduu keessaa tokko Obbo Tuujii Urgeessaa ogeessa fayyaa beekamoo Sayyooti. Obbo Tuujiin qomoo ilmaan Sayyoo keessaa Agloodha. Sayyoo...	Read more »